Ukusetyenziswa kwebhodi yeplastiki eyenziwe ngeplanga?
PP iibhodi zeplastiki incence manzi kwaye ukukhanya. Isakhiwo esingangenwa ngamanzi asiqhekeki ngokulula njengekhadibhodi yesiko, kwaye iyamelana nokubola, umhlwa kunye nokusonta, kwaye inokusetyenziswa kwakhona. Ukususela ngo-2008, Huiyuan Plastic iBhodi Ulenze iye gqolo ukuphucula nokuphuhlisa amandla ayo ...
Ingasetyenziswa ixesha elingakanani ibhokisi yebhodi yokungenisa ingeniso?
Abavelisi beBhodi engenanto Ubomi bebhokisi yebhodi engenayo ye-anti-static engenanto ayihambelani kuphela nomgangatho wemveliso, kodwa inxulumene nendlela yokusetyenziswa. Ukwandisa ubomi benkonzo kunye nokunciphisa iindleko zokusetyenziswa, kufuneka kwenziwe ntoni? Ukuthintela umbane ongashukumiyo, iphepha elingenanto manu ...
Ibhokisi engenanto yebhodi engenayo: Zeziphi izibonelelo zebhokisi engenayo yebhodi engenayo kwisicelo?
Ulenze ebhodini ingeniso ibhokisi Ulenze ibhodi zinezibonelelo ezininzi njengoluhlobo olutsha lwebhodi ekulula ukuyisebenzisa, kunye nebhodi engenanto yebhodi yebhokisi eyenziwe kwimveliso yesibini kunye nokulungiswa kwebhodi engenanto ikwazuza njengelungelo lokusebenzisa ngokulula kwaye ngokuthe ngcembe ithathe indawo yemveli Ibhokisi Kwisicelo ...